अनौठो प्रेमकथा - hamro Desh
लेखक – राज शाह
ऊ खासै दुःखी त थिइन तैपनि खै किन हो आफ्नो नामको पछाडि यही शब्द झुण्ड्याउन मन पराउँथी । मान्छे सानै भएपनि धेरै ठूला ठूला कुरा गर्न सिपालु थिई । पर्ढाईमा पनि कहिल्यै ऊ तेस्रो भइन, प्रथम र द्धित्तीयमा नै उसको प्रतिस्प्रधा चलिरहृयो । सायद उपन्यास र पत्रपत्रिका अनि साथी सङ्गतको असरले होला कक्षा सातको अन्तिम परीक्षा दिनुभन्दा पहिले नै उसले प्रेमपत्र लेख्न जान्ने भएकी थिई ।
ऊ विवेकलाई असाध्यै मन पराउँथी । जीवनका हरेक सपना ऊ विवेककै साथमा देख्थी । विवेकविनाको जीवन ऊ सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्तिनथी । विवेकलाई एकदिन मात्र पनि नदेख्दा उसको जीउमा घाम लाग्दैनथ्यो, खै के के हराएको जस्तो हुन्थ्यो । विवेकको छायाँ देख्दा मात्र पनि ऊ यति धेरै फुरुङ्ग हुन्थी कि भोक तिर्खा सबथोक बिर्सिन्थी । उसका अङ्ग प्रत्यङ्ग रोमाञ्चित भएर कल्पनाको सागरमा पौडी खेलीरहेका हुन्थे । ऊ त्यही संसारमा आहृलादित हुन्थी, दुनिया विर्सन्थी । १२/१३ वर्षो कलिलो उमेरदेखि नै उसको मनमा विवेक प्रतिको प्रेम अगाढ थियो ।
विवेक गाउँको सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केको एउटा सुन्दर, शुशील र मिलनसार किशोर थियो । कसैसँग झै झगडा नगर्ने, चाहिएको कुरा मात्र बोल्ने र मीठो बोल्ने उस्का विषेशता नै थिए । को सँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान थियो विवेकलाई । उसको बोली बचन र बानी व्यहोराको विषयमा गाउँका ठूलाबडाहरू पनि चर्चा गर्थे । हुन त विवेक सानो तिनो बदमासी गर्दै नगरेको भने होइन तर उसका बदमासीहरू कसैले कहिल्यै चाल पाएनन् । पढाइ सामान्य भएपनि गाउँका केटाहरूबीच टाठो बाठो गनिन्थ्यो । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा ऊ कहिल्यै कसैको आँखामा बिझाएन ।
ऊ त्यतिबेला कक्षा सातमा पढ्दै थिई जब विवेकलाई पहिलो प्रेम पत्र लेखेकी थिई र साथी योगेशलाई पुर्याउन लगाएकी थिई । साँझपख थामबारीमा बसेर विवेकले उक्त पत्र पढ्यो । उसलाई के गरुँ के नगरुँ जस्तो भयो । त्यतिबेला स्कुलतिर एक किसिमको प्रेमपत्र लेख्ने लहर नै चलेको थियो । अनि कसको लभ कोसँग पर्या छ, थाहा नपाउने पनि कमै हुन्थे । विवेकलाई किन किन यो कुरा उचित लागेन । पत्रवाला योगेशलाई ‘अब देखि यसो नगर्नु रे भन्देस् ‘ भन्दै चिठी च्यातेर फाल्यो ।
विवेक र ऊ एउटै गाउँका भएको हुनाले दिनहुँजसो भेटघाट भइनै रहन्थ्यो । चाड पर्व आउँदा गाउँमा हुने साँस्कृतिक कार्यक्रमहरूका नायक नायिका नै थिए उनीहरू । तिहारमा देउसी भैलो खेल्दा रात बिरात गाउँका अप्ठ्यारा बाटाहरू र खाल्डा खाल्डीमा विवेकले नै उसको हाथ समाएर लड्नबाट जोगाउँथ्यो । विवेकले उसको हर कुरामा साथ र सहयोग दिन्थ्यो । उसका आमा बाबुले पनि विवेकलाई धेरै माया र विश्वास गर्थे ।
सायद विवेक सँगैको उनीहरूको अभागी छोराको झझल्को विवेकको अनुहारमा देख्ने कोशिस गर्थे उनीहरू । घरमा परिआएको सानो तिनो समस्याहरू पनि उनीहरू विवेकलाई भनेर राय सुझाव माग्थे । यस्तै कारणले पनि होला ऊ विवेक प्रति आकषिर्त भएको । उसका तन मन अब उसका नियन्त्रणमा थिएनन्, स्वत स्फुर्त रूपमा विवेक तिर खिँचिइरहेका हुन्थे । विवेकले पनि उसलाई धेरै माया गथ्र्यो तर जुन नजरले उसले विवेकलाई हेर्थी त्यो नजरले विवेकले कहिल्यै हेर्न सकेन । सधै भेटघाट भएपनि उसले कहिल्यै मुख फोरेर यो कुरा भनेकी थिइन, उसको प्रेम प्रस्ताव केवल पत्रमा नै सिमित थियो, जसलाई विवेकले खासै चासो दिँदैनथ्यो ।
समय वित्दै गयो, ऊ पनि कक्षा चढ्दै गई । तर विवेकलाई पत्र लेख्न छाडिन । यो समयावधीमा ऊ चिठी लेख्ने कलामा पनि पोख्त हुँदै गएकी थिई । कहाँ कहाँ बाट कस्ता कस्ता सारगर्भिक शब्दहरू बटुलेर प्रेमपत्रमा फूलबुट्टा भर्थी । यतिबेलासम्म ऊ सानो तिनो कवियित्री पनि बनिसकेकी थिई ।
चिठीमा मुक्तक, सायरी र कविताहरूले पनि विशेष स्थान पाउन थालिसकेका थिए । योगेश बिचरा चिठी नलगिदिए ऊ रिसाउने लगेर विवेकलाई दिँदा उल्टै हुँकाइ खानुपर्ने । एक दिन विवेकले योगेशलाई साह्रै हपार्यो – ‘तँ किन ब्यर्थै हुलाकी बन्छस् हँ ? तँलाई थाहा छ यार् मलाई यो सब मन पर्दैन, प्लीज अबदेखि यो चिठी ल्याउने काम नगर र उस्लाई पनि भन्दे चिठी नलेख्न भनेर । विवेकको अनुहारमा रिस र हैरानीका लहरहरू सँगसँगै दौडिरहेका थिए । मलाई के भन्छौ, उसैलाई भनन । नभए एउटा सानो कागजमा लेखेर पठाइदेऊ आइन्दा यसो नगर्नु भनेर । योगेशको कुरा पनि विवेकलाई ठीकै लाग्यो । त्यसै रात विवेकले पहिलो पत्र लेख्यो-
तिमी किन म प्रति यति धेरै मरिहत्ते गरेकी? म पनि तिमीलाई माया गर्छ तिमीले सोँचेको जस्तो होइन । म तिमीलाई एउटा बहिनी को रूपमा अथवा एउटा असल साथीको रूपमा मात्र हेर्ने गरेको छु । हेर, यो हाम्रो पढ्ने बेला हो, भविश्य बनाउन केही कुरा सिक्नुपर्ने बेला हो । त्यसैले यस्ता नचाहिँदा कुराहरूमा समय बर्बाद गर्न छाडिदेऊ । र फेरी पनि पत्र लेख्न छाडिनौ भने म भन्दा नराम्रो अरु कोही हुने छैन ।
—-‘ पत्र पट्याएर विवेकले योगेशलाई दियो, योगेशले उस्लाई । विवेकको पत्रले समस्या समाधान गर्ला भनेको त झन् उग्र रूप लियो । चिठी पढिसकेपछि उसको जीवनमा आँधी आयो, उस्का सपनाहरूमाथि तुषारापात भयो । मुटु छिया छिया भयो । ऊ दिउँसै अन्धकार देख्न थाली । त्यो दिन ऊ स्कुल पनि गइन । दिनभर घरमा सिरानी भिजाउँदै बसी ।
साँझ योगेश विवेकको घरमा आयो । यार् तिमीले के लेखेका थियौ त्यस्तो । बिचरी हिँजोदेखि खाना न पानी भएर घरमा रुँदै बसेकी छे ।योगेशको कुराले कता कता गल्ती पो गरिएछकी भन्ने हुन्छ विवेकलाई । ‘मैले आज मेरो घरमा बोलाएको छु, तिमी पनि आउँछौ त्यहीँ कुरा गर्नु भनिदिएको छु । राम्ररी सम्झाउनु यार् ।’ विवेकले के गर्ने के नगर्ने निर्णयगर्नु पहिले नै योगेश त्यहाँबाट हिँडिसकेको थियो ।
राति खाना खाएर विवेक योगेशको घरमा गयो । केही छिनपछि ऊ पनि आई । श्रृङ्गारबिनाको अनुहार मलीन छ, सायद दिनभर रोएर होला उस्का आँखा सुन्निएका थिए । नाक रातो न रातो भएको थियो । अनुहारमा कत्ति पनि कान्ती थिएन । आँखाका डीलबाट ठूल्ठूला आँशुका ढिक्काहरू खस्लान् खस्लान् भै देखिएका थिए । उसको मुहार औँशीको रातभन्दा पनि अँध्यारो देखिएको थियो त्यो बेला । योगेश र विवेक मात्र भएको कोठाभित्र छिर्न ऊ अलि अनकनाई ।
योगेशले विवेकलाई आँखाको इशाराले कतै बाहिर एकान्तमा जाने सल्लाह दियो । विवेक उठ्यो अनि ‘आऊ’ भन्दै अघि लाग्यो, ऊ पछि पछि आई । केही पर पुगेपछि विवेक उभियो, उस्लाई एक पटक हेर्यो, -‘तिमी किन यसो ……………………..’ विवेकले केही भन्न नपाउँदै उस्को आँखाका डीलमा रहेको आँशुको बाँध भत्कियो । ऊ सुँक्क सुँक्क गर्दा गर्दै विवेको छातीमा टाउको जोतेर डाँको नै छोडेर रुनथाली । ‘तपाईले यसरी लत्याउनुभयो भने मेरो जीवन जिउनुको कुनै अर्थ छैन……….. मलाई तपाईको केही चाहिएको छैन केवल माया भए पुग्छ, ….. एक पटक माया गर्छु भनेपनि सारा जीवन यत्तिकै बिताउन सक्छु ………… किन यति धेरै निष्ठुरी बन्नुहुन्छ? म तपाईसँग केवल माया माग्दैछु ………. प्लीज् तपाई नभए म बाँच्न सक्तिन ……….. मलाई जीवन दिनुहोस् …………नत्र म आफै आत्महत्या ……….।’
विवेकलाई असहृय हुँदै गयो, उसले यो भन्दा अघि अरु केही सुन्न सकेन । आफ्नो दायाँ हातका औँलाहरू कतिखेर उस्को मुख थुन्न पुगेछन्, विवेकलाई पत्तै भएन । अरुबेला जति सुकै कठोर बनेपनि विवेकले उस्को आँखामा आँशु देख्न सक्दैनथ्यो । सानै देखि उस्लाई एउटा रोग थियो, -धेरै रोयो भने ऊ बेहोश हुन्थी, सायद उस्को मन कमजोर भएर होला । चाहेर पनि विवेकले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिएन ।
उस्लाई डर लागिरहेको थियो ‘कतै मेरो कारणले कुनै अनर्थ त हुने होइन?’ उस्को आँशुको अगाडि विवेक मैन भएर पग्लियो । विवेकको मनले भन्दै थियो – ‘यो केटी साह्रै नै जिद्दी छे, यदि तैँले अहिले यसको साथ दिइनस् भने यो जे पनि गर्न सक्छे । त्यसैले प्रेम नगरे पनि दयाको भीख दे यस्को जीवनको खातिर । यो केटीलाई मर्न न दे विवेक । नत्र तँलाइ ठूलो पाप लाग्छ जुन तैँले जीन्दगीभर प्रायश्चित गरेपनि पखालिने छैन ।’ विवेकले उस्को आँशु पुछिदियो अनि बिस्तारै उस्को कपाल सुम्सुमाउँदै भन्यो -‘ धत् लाटी, यति सानो कुरामा पनि यत्रो महाभारत गरिहाल्नुपर्छ त ?’
अनि किन तपाई मेरो कुरा बुझ्नुहुन्नत त ?’ उस्ले उल्टै विवेकलाई प्रश्न गरी । म त तिमी मलाई कति माया गर्र्छौर् भनेर जाँचेको पो त ।’
विवेकले बिस्तारै उस्को निधारमा चुम्बन गर्यो । विवेकको एकमात्र न्यानो र्श्पर्सले ऊ आनन्द विभोर भई । ऊ विवेकको छाती नै चिरेर भित्रै छिराँैला झै गरी अँगालोमा कस्सिएर निकैबेर सुँक्क सुँक्क मात्र गरीरही ।
जे होस् उस्को प्रेमले आज विजय पाएको थियो । उस्लाई सधैभरी विवेकको अङ्गालोमा यसैगरी बस्न पाए हुन्थ्यो, यो रात कहिल्यै बिहान नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । ऊ आफूलाई विषिर्एर केवल विवेकमा समाहित हुन चाहन्थी । मनै मन आफ्नो सारा र्सवश्व उस्ले विवेकलाई नै सुम्पिसकेकी थिई । त्यो रात उस्लाई असाध्यै मधुर लाग्यो । केही छिन् पहिले औँशी जस्तो देखिने उस्को अनुहार पल भर मै पूणिर्माको चन्द्रमालाई पनि मात दिने खालको भइसकेको थियो ।
उस्लाई त्यतिबेला थाहा थिएन विवेकले त केवल एउटा सम्झौता गरिरहेको छ, उस्को जीवनको खातिर । हो साँच्चै विवेकले उसँग मायाको नाटक गर्नु सिवाय अर्को विकल्प थिएन । भित्र भित्रै माया गरेपनि जीवन सँगै जिउने कल्पना विवेकले कहिल्यै गरेन । एउटा भूल अवश्य गर्यो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कसैको जीवनसँग खेलवाड गर्यो । विवेकले उस्लाई माया गरेको अभिनय गरिरहृ्यो । ऊ त्यसैलाई नै यथार्थ सम्झेर मख्ख परीरही । विवेकले उस्लाई लुट्दै गयो ऊ आफूलाई लुटाउँदै गई ।
विवेक एस. एल. सी. पास भएपछि सदरमुकाममा क्याम्पस पढ्न गयो । शहरमा उस्का नयाँ नयाँ साथी सङ्गीनीहरू बन्दै गए । ऊ पनि गाउँमा एस. एल. सी.को तयारी गर्न थाली । पढाइमा त ऊ विवेक भन्दा दुई कदम अगाडि नै थिई । विवेकले पनि क्याम्पसमा राम्रै उन्नति गरिरहेको थियो । ऊ पनि राम्रो अङ्क ल्याएर एस. एल. सी. पास गरी । त्यसपछि उस्ले सि. एम. ए. पढ्ने इच्छा परिवार समक्ष जाहेर गरी । उस्का परिवारले पनि एकपटक विवेकलाई सोध्न भुलेनन् । आखिर ऊ सि. एम. ए. पढ्न अर्कै जिल्लातिर लागी ।
अब तिनीहरूबीचको भौतिक दुरी केही टाढा भएपनि उस्ले विवेकलाई आफ्नो ह्रदयदेखि कहिल्यै टाढा राख्न सकिन । विवेकले यता आइ.कम. पास गरेपछि उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं जाने भयो । केही समयपछि ऊ पनि कम्प्युटर सम्बन्धि अध्ययन गर्ने बहानामा काठमाडौं पुगी । विवेकसँग पुनः भेटघाटको शिलशिला शुरू भयो ।
उस्लाई थाहा थियो विवेक उदेखि टाढा भएपछि धेरै चरनहरू चरिसकेको छ, धेरै थरी स्वाद चाखिसकेको छ । विवेकले जतिसुकै गल्ती गरेपनि उस्ले कहिल्यै खै गरिन । झन् मेरै मायामा केही कमी भएर पो होकी भनेर अझ धेरै माया गर्न थाली । विवेकले पनि उस्लाई माया गर्ने अभिनय गर्न छाडेको थिएन ।
नयाँ वर्षो दिन । गोदावरीमा सधै भन्दा धेरै भीडभाड थियो । कोही पिकनिकमा झुमिरहेका थिए त कोही एकान्तमा प्रेमी प्रेमिकाहरूको ओँठ चुमीरहेका थिए । कतै खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन । वैशाख महिनाको गर्मीले थकित र गलित यूवाहरूलाई गोदावरीले शीतलता प्रदान गरिरहेको थियो । ऊ पनि विवेकसँग त्यहाँ गएकी थिई । धेरैबेर उनीहरू त्यहाँ बसे । जीवन र भविश्यका बारेमा धेरै कुराहरू गरे । ऊ अब परिपक्व भइसकेकी थिई । आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भइसकेकी थिई । विवाहपछिका योजना र छलफलहरूमा नै त्यो दिन बिताए उनीहरूले ।
विवेकलाई बिस्तारै आफ्नो गल्तीको आभाष हुँदै गयो । विवेकलाई आफैप्रति घृणा लाग्न थाल्यो-कति स्वार्थी भएछ ऊ । कसैको जीवनसँग खेलबाड गर्ने अनुमति उस्को मनले दिन छाडिसकेको थियो । ऊ कति धेरै विश्वास गर्थी विवेकलाई तर विवेक भने खेलौना जस्तै सम्झेर उस्लाई प्रयोग गरिरहेको छ ।
एकदिन विवेक उस्को कोठामा गयो । त्यो दिन विवेक अरु दिन भन्दा एकदमै गम्भीर देखिन्थ्यो । ‘तिमीले मलाई जति माया दियौ, म जीवनभर पनि त्यति माया दिन सक्तिन होला । म तिम्रो लागि योग्य छैन । मैले आफूले आफैलाई तिमीसँग तुलना गरेर हेरेँ, तिमी कति महान छौ र म कति नीच छु । मैले तिमीमाथि धेरै अन्याय गरेको छु । म पापी हुँ । मलाई तिमी कहिल्यै माफ नगर है किनकि म त्यही पापको पीडाबोधले जीन्दगीभर जल्न चाहन्छु ।’
‘तपाईलाई आज के भएको छ? के कुरा गरेको यस्तो मैले त केही बुझिन नि !’ साँच्चै नै उस्ले त्यतिबेलासम्म केही कुराको मेसो पाउन सकेकी थिइन ।’ विवेक खुल्दै गयो -‘मैले तिम्रो पवित्र मायाको अपमान गरेको छु । म अपराधी हुँ तिम्रो । यही अपराधबोधले मेरो छाती जलिरहेको छ । म तिम्रो हुन लायक छैन । मलाई फोहर नालीको किरा सम्झेर विषिर्देऊ ।’ विवेकले उसँग आँखा जुधाउन सकिरहेको थिएन ।
‘तपाईलाई भुल्न सक्ने भए धेरै पहिले नै भुलिसक्ने थिएँ नि । प्लीज् यस्तो कुरा नगर्नुस् ।’ उस्का आँखामा अझैपनि आशाका केही किरणहरू बाँकी थिए ।
‘नाई मलाई तिमीले भुल्नै पर्छ । सधैभरी मैले तिमीलाई केवल पीडा दिएँ । तिमी त्यस्मा मायाको मल्हम् लगाउँदै गयौ । म जस्तो तुच्छ व्यक्ति तिमीजस्ती महान् नारीको पति भएको सुहाउँदैन । हेर जीवन लामो छ, तिमीले एक से एक शुशील केटा भेट्न सक्छ्यौ । म जस्तासँग तिम्रो त्यो सुन्दर जवानी खेर नफाल ।’ उस्लाई लाग्यो विवेक ऊदेखि टाढिने बहाना बनाइराखेको छ । विगतमा पनि विवेकका थुप्रै गल्तीहरूलाई उस्ले आँशु पिएर सहेकी थिई । प्रेममा त्याग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उस्ले राम्ररी बुझेकी थिई ।
‘यसमा तपाईको कुनै दोष छैन । गल्ती मेरै हो । मैले जबरजस्ती तपाइलाई आफ्नो बनाउने कोशिष गरेँ । तपाईले मलाई माया गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त मलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो । तैपनि एक दिन त बगेको खोला पनि र्फकन्छ रे भन्दै म तपाईको प्रतिक्षा गरिरहेँ । तपाईलाई म अब धेरै बाँधेर राख्न सक्तिन, जानुस् तपाई मुक्त हुनुहुन्छ ।’ यति भन्दा उस्को गला धेरैपटक अबरुद्ध भएको थियो ।
आखिर जे हुनु थियो त्यो भएरै छाड्यो । विवेकले अन्तिम पटक उस्को निधारमा चुम्बन गरेर हिँड्यो । ऊ जडवत् भई, केही बोल्न सकिन न त विवेकलाई रोक्न नै सकी । उस्को जीवनमा आँधी आयो, सारा आकाश झरेर उस्लाई थिचेजस्तो लाग्यो । पाइताला मुनीको जमीन भास्सिएजस्तो लाग्यो । आज उस्को संसार विलीन भएर कतै शुन्यमा हराएजस्तो लाग्यो ।
यतिञ्जेल बाटो खोजीरहेका उस्का आँशु अनायास् उस्का कोमल गालाहरूलाई र्श्पर्स गर्दै तल झरे । उस्को छाती भक्कानिएर आयो । ऊ आज धेरै रोई । केही दिनसम्म यसरी नै रोइरही । २/४ हफ्ता पछि उस्ले आफूलाई सम्हाली । त्यो निर्दयीलाई सम्झेर अबदेखि कहिल्यै रुँदैन भनेर कसम खाई । त्यो शहर अब उस्को लागि आफ्नो थिएन । जस्लाई आफ्नो सम्झेर यहाँ आएकी थिई उसैले नै परित्याग गरेपछि अब त्यहाँ बस्नुको कुनै अर्थ थिएन ।
ऊ त्यो गाउँ शहर सबै छाडेर धेरै टाढा गई । ऊ अहिले ग्रेजुएट भएर आफ्नै खुट्टामा उभिएकी छ । साँच्चै ऊ आजभोलि धेरै धैर्यवान भएकी छ रे । आँखामा आँशु सिध्दिएर हो वा मन दह्रो भएर हो ऊ आजभोलि रुनपनि भुलिसकेकी छ रे । कहिलेकाँही घरमा उस्को विहेको कुरो चल्दा झलक्क विवेकको निष्ठुरी अनुहार उस्को आँखामा आउँछ तितो सम्झना बनेर । अनि ऊ एकपटक फेरी भुइँमा थुक्छे प्याच्च । समाप्त